Ka ọ dị ugbu a, ọ bụ naanị 14% nke nkwakọ ngwaahịa plastik n'ụwa niile ka a na-emegharị-naanị 5% nke ihe ndị a na-ejigharị n'ihi mkpofu nke usoro nhazi na imegharị. Ighaghachi ihe nkwakọ ngwaahịa mara mma na-esikarị ike. Wingstrand na-akọwa, sị: “E ji ọtụtụ ihe mejupụta ọtụtụ nkwakọ ngwaahịa, ya mere ...
Ọtụtụ n'ime nkwakọ ngwaahịa ahụ bụ nke iko ma ọ bụ acrylic？
Ọtụtụ n'ime nkwakọ ngwaahịa ahụ bụ nke iko ma ọ bụ acrylic. Agbanyeghị, n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, anyị achọpụtala ọtụtụ ụdị ịchọ mma dị na ahịa na-eji karama ude mmiri. Yabụ kedu ihe eji eme ude mmiri na-ewu ewu? Nke mbu, iko ma obu acrylic ude mmiri bu oke oke, na ibu adighi eduzi ...
Nyocha nke uru na ọghọm dị na karama nkwakọ ngwaahịa plastic
A na-atụ anya ka karama plastik zuru ụwa ọnụ too nke ukwuu n'oge amụma. Ngwa ndị na-eto eto na ụlọ ọrụ ọgwụ na ịchọ mma na-eme ka achọ karama rọba. E jiri ya tụnyere ihe ndị ọzọ na-enweghị mgbagha, nke dị oke ọnụ, nke na-emebi emebi na nke dị arọ (dịka iko na m ...
New abịa airless karama – Why go airless for your ịchọ mma nkwakọ?
Mbadamba mgbapụta na-enweghị nchebe na-echebe ngwaahịa ndị nwere mmetụta dịka anụ ahụ na-elekọta ude, serums, ntọala, na ihe mkpuchi ndị ọzọ na-enweghị ihe mgbochi site na igbochi ha ịpụ na ikuku, si otú a na-eme ka ndụ dịkwuo elu ruo 15% karịa. Nke a na - eme ka teknụzụ na - enweghị ikuku bụrụ ọdịnihu ọhụụ ...
Black karama jel Polish, Ngosiputa Ngwa Powder with Sifter, Cream Ololo Ngosiputa Ngwa, Ihe Ude Ngosiputa Ngwa, Creamchọ mma ude ite, Anya ude ite,